हाइड्रोलिक ट्रान्सियन पट्टी प्रेस ब्रेक, पाना मेट्ने झुक्याउने मेसिन - Bambeocnc
हाइड्रोलिक ट्रान्सियन पट्टी थिच्ने ब्रेक, पानामा धातु झुकाउने मेसिन
Bambeocnc मेशिन उद्योग क्षेत्र मा लगभग 10 वर्ष को लागी रहेको छ, हामी उत्पादन र सबै प्रकार को एनसी / सीएनसी प्रेस ब्रेक,3या4रोलर रोलिंग मिसिन, स्विंग बीम र विभिन्न श्रेणी guillotine खुर्सानी सहित उच्च गुणवत्ता कतरनी मिसिन, हाइड्रोलिक प्रेस, खैरो मिसिन , मिलिंग मिसिन आदि। सबै मिसिनहरू सीई प्रमाणीकरण अन्तर्गत छन् र युरोपको बजारमा अनुभवी हुन्छन् जस्तै युनाइटेड किंग्डम, बेल्जियम, रोमानिया, हंगेरी, क्रोएशिया र विश्वभरका सबै अन्य देशहरू।
हामी मासिक 40 सेट प्रेस ब्रेक मिसिन मासिक उत्पादन गर्दछौँ। यस ठूलो उत्पादन मात्रामा, यसैले हामीलाई कारखाना लागत स्तरमा मूल्य-प्रभावकारी बनाउन सक्षम पार्दछ। हामी आफ्नो लगानी पछि राम्रो रिकभरी लागतको लागि हाम्रो पार्टनरसँग सहयोग गर्न वित्तीय लचीला सिद्धान्तमा सामेल हुन्छौं।
हामी आवश्यक भएमा उपलब्ध इन्जिनियरिङ संग ग्राहक सेवा-आधारित बिक्री सेवा प्रदान गर्दछौं। कुनैपनि अवस्थाहरूमा, हाम्रो कार्य छिटो प्रतिक्रियामा छ, दुवै परामर्श वा साइट निर्देशनमा तत्काल कार्य।
मेशिन WC67Y (वा यो पेपरमा) टोरियन बार तुल्यकालन NC / CNC प्रेस ब्रेक, कम्पैक्ट इन संरचना, सजिलो अपरेसन समायोजन, प्रयोगमा स्थिर र उच्च परिशुद्धताको सिंक्रोनाइजेसन हो।
सामाग्री / धातु प्रसंस्करण: कार्बन इस्पात
थप सेवाहरू: मोरङ
प्रमाणन: आईएसओ 9001: 2000
मिसिन प्रकार: प्रेस ब्रेक
कच्चे माल: शीट / प्लेट रोलिंग
1. सबै मेशिन निकाय चीन चीन बाओ इस्पात उद्यम देखि उच्च गुणवत्ता वाले स्टील्स द्वारा विलम्बित छ। वेल्डिङ प्रक्रिया पछि, मेशिन निकायले सन्तुलन र परिशुद्धता सुनिश्चित गर्न मिल्नेछ।
2. सिलिन्डर भित्र मेकेनिकल ब्लक गेजबाट बीम स्ट्रोकबाट बच्नको लागि।
3. स्तरको स्थिति राख्नको लागि दुई सिलेंडर समिकरणको लागि ब्यालेन्स समायोजन।
4. मशीनले ESTUN E21 सीएनसी प्रणाली अपनाएको छ, ब्याक गेज सही स्थितिमा जान सक्छ। सटीकता ± 0.1 एमएम हो यदि आवृत्ति ट्रांसफार्मर प्रयोग गरिन्छ।
5. सबै इलेक्ट्रोनिक तत्व सीई मानक युरोपियन मेशिन SIMENS, SCHNEIDER बाट हुन्। उच्च स्थिरता संग
6. युरोपेली मानक मर्छ / पंच डिजाइन उपलब्ध छ। साधारणतया हामी सबै मर्दाको लागि मानक चार वी डिजाइन प्रयोग गर्छौं र मानक पंच तीनवटा पक्षमा वि परिवर्तनीयसँग विभिन्न प्लेट मोटाई डिजाइनको लागि सक्षम छ। युरोपियन क्लाइन्टहरूका लागि, हामी अखरोट क्लम्प संग सिंगल वी र शाफ्ट ब्लेड पंच दर्जी डिजाइन गर्न सक्छौं। सबै पंच र मर्छन् कडा स्क्वायरको साथ उच्च गुणस्तर T8A प्रयोग गर्दछ
7. मानववादी चिन्ता सबै विवरणहरूमा सुरक्षा डिजाइन र बामब्रोएन मानक माध्यमबाट वैज्ञानिक विवरण पनि।
8. तालिकाबद्ध कार्य-तालिका लम्बाइ र बीम को लागि काम गर्ने गति ग्राहक को उत्पादन को मांग अनुसार।
1. Esuntun e21 सीएनसी प्रणाली
2. सिमेन्स वा स्किइडर इलेक्ट्रोनिक तत्वहरू
3. अमेरिका पार्कर सील
4 जर्मनीले हाइड्रोलिक प्रणालीलाई उचाल्छ
चीन चीन yongshun उच्च गुणवत्ता गियर पंप
6. सिमेन्स मोटर वा चीनका पूर्व पूर्वी मोटर (चीनमा सिमेन्स मोटर बनाइएका कारणले लामो डिलिवरी अवधि छ, यदि विशेष भोल्टेज, हामी सिमेन्स प्रयोग गर्दैनौं जबसम्म ग्राहकले मिसिनको लागि लामो डिलिवरी अवधि पनि स्वीकार गर्न सक्दछ। प्रायः सामान्य भोल्टेज, यसका लागी एकदमै रमाइलो लाग्ने कामको लागी केहि समय अगाडी बढ्दै गएको छ।
7. चीन jianhu सिलेंडर छ क्रोमरेट treatmetn
8. पंच र मर्छ: t8a
9। यदि छोटो सानो पर्ची पंच झुक्याउने आवश्यकता पर्दछ भने धारा पंच र मरियमलाई बहाइदिन्छ
10. ब्याक गेज: मिश्र धातु उच्च गुणस्तर मानक
11. पाइपहरू: विरोधी र जंग दुवै बाहिर उपचारको साथ विरोधी-जंग फास्फोरेशन पाइप
12. पाइप कनेक्टर: शङ्घाई कम्पनीको उच्च गुणस्तर कोटको भित्र उच्च योग्यता मुहरको साथ हाइड्रोलिक तेलको रिसार्ज रोक्न।
13. सुरक्षाको लागि खुला-ढोका बन्द-बन्द प्रकार्यको साथ रेयर ढोका
14. हाइड्रोलिक तेलको ट्यांकको प्रवेश र अवस्थित दुवै, फिल्टर सुसज्जित छ।
मकोनिकल पंच रिलीज क्लैंप
1 खण्ड पंच र मर्छ - आवश्यक भएमा हामीलाई आयाम प्रदान गर्दछ
2. आवृत्ति ट्रांसफार्मर --- मूल्य usd
3. फास्ट रिलीज क्लैंम्प --- usd600 / सेट मिसिन
4 बल बल पछाडि उँगलहरू --- usd250 / सेट मिसिन
Estun e21 रिचार्ज परिचय
1. Estun e21 एक सरल सीएनसी नियन्त्रण प्रणाली हो भने एस्टन ई 200 लाई न्यून मूल्यको साथ बदल्न।
2. एस्टुन कम्पनी होल्यान्ड डेलेम र चीन एस्टेन द्वारा संयुक्त छ
3. Estun e21can नियन्त्रण एक्स अक्ष स्थितिमा काम गर्दैछ
4. एस्टोन e21 राम्रो काम गर्नेछ आवृत्ति ट्रांसफार्मर संग। आवृत्ति ट्राफिकर्ता मानक घटक होइन, वैकल्पिक।
5. भविष्य भविष्यको लागि सफ्टवेयर प्रोग्राम र मेमोरी हुन सक्छ
6. एक कार्यक्रममा विभिन्न चरणहरू सेटअप गर्न सकिन्छ।
7. टाइमर झुकाउने समय नियन्त्रण गर्न सक्छ
8. x / y दुई अक्ष नियन्त्रण गर्नुहोस्
9। सञ्चालन नियन्त्रक उपलब्ध छ
10. स्थापना पुस्तिका उपलब्ध छ
QC12y-6 × 3200 हाइड्रोलिक स्विंग बीम प्लेट कतरनी मिसिन
Wc67k एनसी ट्रान्सियन बार सिक्र्रो हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मिसिन
हाइड्रोलिक WC67Y ट्रान्सियन पट्टी प्रेस ब्रेक
5 अक्ष स्वचालित रूपमा सीएनसी ट्रान्सियन पट्टी थिच्ने ब्रेक
टार्सियन बार एनसी स्टील प्लेट हाइड्रोलिक ओमेगा प्रेस ब्रेक
उच्च गुणवत्ता हाइड्रोलिक सीएनसी तर्सरी पट्टी प्रेस ब्रेक मिसिन
चीन हाइड्रोलिक ट्रान्सियन बार प्रेस ब्रेक मिसिन बिक्री को लागि
100T टार्सन बार हाइड्रोलिक सीएनसी प्रेस ब्रेक र झुकने मिसिन
WC67Y-63T2500 हाइड्रोलिक टोरयन बार प्रेस ब्रेक मोन्डिंग मिसिन
NC हाइड्रोलिक पाना लोहा प्लेट क्यान्सरिंग मिसिन
समायोज्य कोण हाइड्रोलिक भिचिंग मिसिन
wc67k हाइड्रोलिक सीएनसी एल्यूमिनियम इस्पात प्लेट झुकाव मिसिन
उच्च गुणस्तर सीएनसी हाइड्रोलिक प्लेट शीट प्रेस ब्रेक